सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्न गरेको निर्णय कस्तो लाग्यो ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः चैत्र १०, २०७५ - साप्ताहिक
कसैमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु समस्याको समाधान होइन । बरु दुवै पक्ष अलिकति लचिलो भएर वार्तामार्फत समस्या सुल्झाउँदा ठीक होला । सिके राउतजस्ता विखण्डनकारीसँग वार्ता गर्न सक्ने सरकारले विप्लवसँग किन नसक्ने ..? यो सरकारको अपरिपक्व र आडम्बरी निर्णय हो ।
नेकपा विप्लव पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने काम घरको जोत्ने गोरुलाई छाडा छाडेर साँढेलाई ल्याएर जोत्नुजस्तै हो ।
नेपालको संविधानमा कुनै व्यक्ति अथवा दलले आफ्नो माग स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न पाउनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । आफ्नो माग राख्दै आएको विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको गैरकानुनी कार्य हो ।
हत्या, हिंसा, आतंकमा प्रतिबन्ध लगाउनु जायज हो, तर प्रतिबन्धको नाउँमा देशमा अर्को गृहयुद्ध निम्त्याएर सर्वसाधारण जनतालाई आतंकित पार्ने र बलिको बोका बनाउने काम कदापि स्विकार्य हुन्न ।
प्रतिबन्ध लगाउनु राजनैतिक नैतिकता बाहिर छ, संविधानअनुसार पनि दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन । कसैको लहड र उक्साहटमा देशले युद्ध थाम्न सक्दैन ।
नेपालको संविधानमा कुनै पनि राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध नलगाउने उल्लेख गरिएको छ । आजको सत्ता पक्ष पनि हिजोका दिन हत्या–हिंसामै संलग्न थियो । सरकारको निर्णयले मुलुकमा मुठभेड निम्त्याउने देखियो । के यही हो आमुल परिवर्तन ?
विप्लवले उठाएका माग र समस्याहरू जायज छन्, तर जुन तरिकाले प्रस्तुत भैराख्या छ, त्यो ठीक छैन । सरकारले सकेसम्म सबैलाई समेटेर उनीहरूका माग सुनी जायजअनुसार पूरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यस्तो प्रतिबन्धले झन् जटिलता ल्याउन सक्छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रतिबन्ध भन्ने शब्द नै आउनु हुन्न, एक–आपसमा बसेर छलफल गरेर सकारात्मक निर्णय लिनु उचित हुन्छ । प्रतिबन्धले देश द्वन्द्वको दलदलमा फस्छ ।
प्रतिबन्ध गैरकानुनी कार्य होे । लाएर लाग्न पनि सक्दैन । आपराधिक कार्यमा कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ । सरकार अपराध मिनाहा गर्नेे तानाबाना बुन्दैछ ।
वार्ताका लागि पहल पनि नगरेर निषेध गर्ने जुन काम सरकारले ग¥यो, त्यो गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय हो । सरकार आफंै द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्दैछ ।
विप्लवले उठाएका एजेन्डालाई आत्मसात् गर्छु, तर क्रियाकलाप त गलत देखियो नि ? गतिविधिअनुसार सरकारको नीतिलाई गलत भन्न सकिन्न ।
विद्रोह कहिल्यै प्रतिबन्धबाट समाधान हुँदैन । विद्रोह राजनैतिक समझदारीबाट समाधान हुन्छ । कतिपय कुरामा विप्लव गलत छन् त कतिपय कुरामा सरकार । विप्लवको पार्टी आतंककारी होइन, राजनैतिक एजेन्डा बोकेको पार्टी हो ।
प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको नेपालको सन्दर्भमा मलजल गर्नु सरह हो, सरकारको यो नीतिले नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता उत्तेजित हुँदै जाने र आन्दोलनले उग्र रुप लिने खतरा देखिन्छ । जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।
निषेध होइन, सहमति, सहकार्य र एकता नै आजको आवश्यकता हो, सबैले ध्यान पु¥याउन् । हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाटै सम्भव छ ।
प्रतिबन्ध लगाउनु नै समस्याको समाधान होइन, सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो वार्तामा बसेर समस्या समाधान गरेको भए झनै राम्रो हुथ्यो ।